Diyaarad Dagaal Oo Duqeyn Ku Qaaday Deegaan Alshabaab Ka Maamulaan Gobolka Gedo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garbahaarrey, Mareeg.com: Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaasheegaya in diyaarad dagaal ay manta duqeysay deegaan ka baxsan magaalada garbahaarrey, kaasoo Alshabaab maamulkaan.
Deegaanka la duqeeyey ayaa la sheegay inuu yahay deegaanka Birta Dheer oo 18-KM oo dhinaca Koonfur ka xiga Magaalada Garbahaareey halkaasoo dhowr jeer ooh ore ay ku dagaallameen ciidamada dowladda iyo Alshabaab.
Sarkaal ka tirsan Ahlusuna Waljamaaca oo lagu magacaabo Sheekh Isaaq Xuseen Mursal, islamarkaana ah Xoghayaha Gaashaandhiga ee Ahlu Sunna Wal-Jamaaca ee Koonfur Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Alshabaab uu jiro, wuxuuna xusay inuu khasaare geystay.
Alshabaab weli kama hadlin weerarka dadka deegaanku sheegayaan, iyadoo aysan weli jirin warar xaqiijinaya cidda weerarka lagu bartilmaameedsaday.
Magaalada Garbahaarrey waxaa ku sugan ciidamo taabacsan dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya, hase ahaatee deegaano aan ka fogeyn ayaa waxaa maamulka Alshabaab.